Waa Maxay Farqiga u Dhaxeeyo Hogaamiye Iyo Maamule? “Management And Leadership” | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Hibo Ciise, February 17, 2016
Waxyaabaha uu Ka Kooban Yahay Dhiigga
Miski Cabdinuur Salal, December 8, 2019
Cabdijabaar Sh. Axmed — November 19, 2016
Inta badan waxaad moodaa inay iskumid yihiin maamule iyo hogaamiye. Balse adiga ma qabtaa aragtidaas? Ma waxay kulla tahay inay isku mid yihiin maamulnimada iyo hogaamiye nimada? Caadiyan waxaa jira ururo badan sidda kuwa jaamacaha, haayadaha, dowladaha, qoraayaasha, iyo kuwa cilmi baarista ku sameeyo arrimaha la xariira mawduucaan waxay sheegaan inay kala fog-yihiin farqiga u dhaxeeyo hogaamiye iyo maamule.
Ulla jeedka maqaalkaan ayaa ah inaan kala saarno farqiga u dhaxeeyo hogaamiye iyo maamule. Waxaan jeclaani lahaa inaan waxwalbo ku sharaxno afkeena hooyo ‘Af-soomaali’, si cidwalbo ay u fahmi karto waxyaabaha aan qoraayo, balse waa muhiim meelaha qaarkiisa oo aan isleeyahay mugdi ayaa ku yara jira inaan ku qoro Af-ingiriiska.
Inaan si fiican u fahano waxwalbo waa muhiim, madamaa aanu leenahay maskax awood-leh oo lagu keedini karo macluumaad badan. Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah waa maxay ‘Maamule’? waa maxay ‘hogaamiye’?
Waa maxay Hogaamiye ‘leadership’?
Falan-qaynta ku saabsan hogaamiye waxaa horey ugu hadlay qorayaal badan, sidda kuwa ka tirsan Tukesomalism.com. Waxaa kaloo jira qorayaal badan oo Reer-galbeedka ka mid ah ayaa wax badan ka qoray arrinta ku saabsan hogaamiye iyo maamule sidda Peter Drucker.
Peter Drucker wuxuu ku qeexay hogaamiye nimada sidda tan ”qeexitaanka kaliga ee hogaamiye waa qof leh dad asiga raacsan uu hogaamiyo. Si aad u kasbato dadka aad hogaaminayso waa inaad ku yeelato saameyn laakiin meesha waa inaysan ka marnaanin daacadnimada si aad guusha u gaarto”
Peter Drucker sums up that: “The only definition of a leader is someone who has followers. To gain followers requires influence but doesn’t exclude the lack of integrity in achieving this”
Hoggaamiyaha wuxuu qabtaa waxa saxda ah, halka maamulaha uu qabto waxyaabaha saxan –Peter Drucker
Leadership is doing the right things, management is doing things right. – Peter Drucker
Aragtida kala duwan ayaa waxay tilmaamaysaa in hoggaanku yahay waxyaabaha kale aan sidaas ugu duwaneen saameynta bulshada. Waxayna tilmaameen in maalin walbo qofka bini’aadamka uu hogaamiye u yahay nafsadiisa/nafsadeeda iyagoo qabanaayo waxyaabo muhiim u ah noloshiisa ama nolosheeda, sidda inay aadaan goobaha waxbarashada, inay aqristaan Quraanka kariimka, buuggaag, maqaalo waxtar u leh noloshooda, inay wax ka ogadaan jaraa’id-yada kasoo baxa dalkooda, xerashada dhar qurxoon, qaadashada koorsooyinka ay ku dhisayaan noloshooda, caruurta oo iskuulka laga soo wado, inay raadiyaan lamaane nolosha ku haboon iyo iwm.
Hogaamiye-nimada qofka maku dhashaa mise waa wax la abuuray?
Hogaamiyaha wuxuu leeyahay awood uu ku dhiirogelini karo dadka, saameyn ku yeelani karo dadka si ay u gaaraan guusha ay hiigsanayaan. Wuxuuna leeyahay awood hal abuurnimo leh, haddii ay soo wajahaan qatar ka timaaday xagga hogaankiisa wuxuu islamarkiiba ku fakiraa siddii uu ugu bixi lahaa.
Qofka markuu hogaamiye yahay waxaa wanaagsan in daacadnimo kula dhaqmo dadka uu hogaamiye u yahay. Haddii ay noqoto shirkad ama dad aad hogaamiye u tahay waxaa wanaagsan inaad si fiican ulla dhaqanto, daacadna aad u ahaato dadka ku aaminay sidda diinteena Islaamka qabto.
Waa Maxay Maamule ‘Management’?
Maamule waa qaab maamul oo lagu gaaro hadaf-yada uu hiigsanaayo ururka. Urur walbo wuxuu leeyahay bayaan hadaf iyo bayaan hawl. Dhammaan bayaanada ururada waxay tilmaamaan halka uu hiigsanaayo ururkaas.
Maamulaha waa shaqsiga toosiya, oo illaaliyo siddii guul loogu gaari lahaa hadafyada ururka. Maamulaha waa shaqsiga marwalbo maskaxdiisa ay ku jirta siddii loo gaari lahaa hadafyada ay hiigsanayaan. Marwalbana waa shaqsi jecel in waxwalbo si fiican loo illaaliyo, oo hadana si fiican loo isticmaalo oo si wanaagsan loo maamulo. Inta badan maamulaha wuxuu diirada saaraa siddii ay ku gaari lahayeen hadafyadooda.
“Hogaamiyaha waa shaqsi horseeda hogaanka dadka, halka maamulaha uu yahay shaqsi maamula shaqada loo baahan yahay in la qabto.”
Marwalbo shirkadaha wey guuldareystaan haddii ay haysanin maamule fiican. Dadka inta badan waxay jecelyihiin in loogu yeero hogaamiyaha shirkad ‘hebel’, balse waxaa jirto oo muhiim ah inaan wada ogaano marka aad tahay maamule waxaa wanaagsan inaad ogtahay booska aad u hayso ururka aad ka tirsantahay. Waxaa wanaagsan inaad illaaliso masuuliyada laguugu yeeray oo ah maamule. Markuu lagu yiraahdo maamulaha shirkad ‘hebel’ waxaa wanaagsan inaad shirkadaas u illaaliso qeyraadkeeda iyo hogaanka wanaagsan oo aad kula dhaqanto shaqaalaha ka hawlgalo goobta.
Bulshada marwalbo wey u baahan tahay cid wax u maamusho, maamul-xumada waxaa laga dhaxlaa in bulshada ay noqoni weyso kuwa isku kalsoon oo wax wada qeybsani karto.
Hoggaamiyaha wuxuu qabtaa waxa saxda ah, halka maamulaha uu qabto waxyaabaha saxan –Peter Drucker. Marka uu sidaas leeyahay Peter Drucker wuxuu kala jeedaa hogaamiyaha waa shaqsiga marwalbo horsed u ah hawlaha la qabanaayo. Wali horey ma u aragtay digaaga/doorada markii ay dhasho ilmaheeda ayay u hogaamisaa siddii ay wax u cuni lahayeen? Ilmaha yar ee digaaga hooyada afka waxbo uma geliso ee waxay marka horre tustaa sidda wax loo cuno kadibna iyaga ayaa cuno, sidaas ayaa la yiraahdaa hogaan. Hogaamiyaha wuxuu saxaa hadafyada ururka halka maamulaha uu fulinaayo siddii hawlahaas lagu dhamayni lahaa ama loo suurta gelini lahaa. Marka uu hogaamiyaha sameeyo jaho cusub, maamulahana wuxuu xakameeyaa jahada la sameeyay, wuxuu illaaliyaa qaab walbo oo lagu gaari karo hadafkaas, asigoo xakameenaayo qeyraadka shirkada ay leedahay iyo kuwa ka shaqeeyo.
Tags: Waa Maxay Farqiga u Dhaxeeyo Hogaamiye Iyo Maamule? “Management And Leadership” |Tukesomalism.com
Next post Gobollada Soomaaliya Tan Iyo Xorriyaddii 1960 'Jamhuriyadda Soomaaliya' |Tukesomalism.com
Previous post Muqdisho Sidaan Waad Ka Dhigi Kartaan
Tallooyin Iyo Xikmado Nolosha Ku Saabsan 9.50 views per day | by Maxamed Juxa